Xaaladda siyaasadeed ee Aljeeriya oo markale cakirantay ka dib markii uu Botafiiqa dib u dhigay doorashadii madaxtinimo - Halbeeg News
Madaxweynaha Aljeeriya Cadicasiis Botafliiqa xuquuqda sawirka: online
ALGIERS(HALBEEG)-Kaddib saddex todobaad oo dibadbaxyo ah oo ay dadweynaha dalka Aljeeriya ku diidanayaan in madaxweyne, Cabdicasiis Botafliiqa uu markale isusoo sharraxo tartanka madaxtimada dalkaas ayuu madaxweynaha soo saaray go’aaanno u cuntami waayay dadweynaha dalkiisa.
Botafliiqa ayaa ku dhawaaqay in uu ka noqday go’aankiisii hore ee ahaa in uu isusoo sharraxo doorashada soo socota isaga oo ku sababeeyay da’diisa oo weynaatay iyo caafimaadkiisa oo liita awgii aanay suura gal ahayn in uu qaranka usii shaqeeyo.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in uu baajiyay doorashadii madaxtinnimo ee lagu madlanaa in ay dhacdo18 bisha Abriil ee soo socota taasoo dhabar jab ku noqotay himilooyinkii shacabka Aljeeriya.
Madaxweynahan 82 jirka ah ayaa ku dhawaaqay in inta uusan xilka dhiibin uu qaban doono shirweyne qaran, sidoo kalena dib u eegis lagu samayn doono dastuurka dalka Aljeeriya.
Ra’iisul wasaarihii Aljeeriya, Axmed ow Yaxye iyo xukuumaddiisii ayaa iyana xilka iska casilay waxaana xilkaas loo dhiibay Nuuraddiin Badawi oo laga sugayo in uu soo dhiso xukuumad aanan la saadaalin karin caynka ay noqon doonto waxaa xusid mudan in Nuuraddiin ka mid yahay ragga saaxiibka dhow la ah madaxweyne Botafliqa.
Walow madaxweyne Botafliiqa uu ku dhawaaqay in uusan mar dambe isasoo sharraxaynin ayaa haddana waxaa wali taagan caqabad kale oo ah in uu xilka sii kororsanayo iyadoo aysan jirin qodob dastuuri ah oo uu arrinkaa u cuskanayo.
Dadka falanqeeya siyaasadda dalka Aljeeriya ayaa tallaabada madaxweyne Botafliiqa uu uga harayo doorashada ku tilmaamay qeyb ka mid ah natiijadii wanaagsanayd ee ka dhalatay dibad baxyadii lagu muujinayay rabitaanka dadweynaha hase yeeshee waxay walaac ka muujiyeen go’aannada kale ee arrinkaa ku lammaansanaa.